कस्तो बिडम्बना ! एकै परिवारका छ जना गुमे, दागबत्ती समेत दिने कोही बचेनन् – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कस्तो बिडम्बना ! एकै परिवारका छ जना गुमे, दागबत्ती समेत दिने कोही बचेनन्
कस्तो बिडम्बना ! एकै परिवारका छ जना गुमे, दागबत्ती समेत दिने कोही बचेनन्
बिहीबार रातिदेखि अविरल वर्षा भइरहेको थियो । पूर्णिमापछिको अँध्यारो रात । आकाशबाट पानी भाँडोबाटै घोप्टाए जसरी परेको थियो । बिजुली चम्कँदो रात । त्यहीमाथि बादलको गड्याङगुडुङ् । मस्त निद्रामा थिए सबै गाउँले । बिहान ३ बजेपछि जब भिरपाखा पहराहरू भत्किएर गाउँतर्फ बगे, अनि बगायो बिम तथा मराङका मानवबस्ती । अनि सँगै त्यही बस्तीमा मस्त निद्रामा रहेका ३१ जनालाई पनि बगायो, उनीहरूकै जिन्दगीसँगै । अहिलेसम्म २७ जनाको लाश भेटियो, बिम र मराङमा भने अझै चार जना बेपत्ता छन् ।
मालिका गाउँपालिका–७, बिमका गौदेवी नेपाली, विशेष नेपाली, वीरबहादुर नेपाली, वीरबहादुरका तीन महिनाका छोरा, विष्णु नेपाली र सन्दीप नेपालीले संसार छाडे । एक जना गम्भीर घाइते हुनुभयो, पूर्णबहादुर नेपाली । पोखरामा उपचाररत रहनुहुन्छ, उहाँ । गम्भीर घाइते भएर उपचारका लागि पोखरा अस्पतालमा पूर्णबहादुर छ’ट्पटाइरहनुभएको छ । आफ्नो र भाइ वीरबहादुरको सबै परिवारको निधन भयो । उहाँले परिवारलाई जोगाउन खोज्दै गर्दा आफैँ गम्भीर घाइते हुनुभयो ।
असार २६ गते बिहान ३ बजे गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँ २७ गते शनिबार दिउँसोसम्म छट्पटाएरै भग्नावशेषमा रहनुभयो । उहाँलाई बेनीका नारायण जिसीको पहलमा प्रभु एयरको हेलिकोप्टरले उद्धार गरी पोखरा पुर्याइयो । आफू घाइते अवस्थाको पीडाले छट्पटिइरहनुभएका पूर्णले आफ्नो परिवारका छ जनाको लास हेर्न र दागबत्तीसम्म पनि दिन पाउनुभएन । उहाँको परिवारको सबै सदस्यलाई दागबत्ती नाताले काका पर्ने एक जनाले दिएको समाचार आजको गोखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको उपचारमा ‘प्लाज्मा थेरापी’ विधि अपनाइने